အကယ်ဒမီ…ရှော့ …။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အကယ်ဒမီ…ရှော့ …။	14
Posted by black chaw on Aug 19, 2015 in Creative Writing, Poetry | 14 comments
ကျွန်တော် နဲ့ ကဗျာ...။
Come Wayy ရေ
လောကဓံ တရားထက် ပြင်းတဲ့ အရက်
ငါ ကိုယ်တိုင် ချက် နေတယ်ကွာ
လို့ သုံးကြိမ်တိတိ ရွတ်ပြီး
ရေ လုံးဝ မရောပဲ
သံနေသံထားနဲ့ (လေးဖြူ ကီးမျိုးနဲ့)
ပါဖေါ့မန့် ကောင်းကောင်းနဲ့ (ဖြူဖြူကျော်သိန်း စတိုင်မျိုးနဲ့)
ဟိတ်နဲ့ ဟန်နဲ့ (ဦးအောင်သောင်း ယပ်တောင်ခပ်ခံနေပုံမျိုးနဲ့)
အဲဒါ အကယ်ဒမီ ရှော့နော်
အောင် မိုးသူ says: နင်လားဟဲ့ လောကဓံ
ကွန်းမန့် ဖတ်ပြီး ဘီစီ ပေးချင်စိတ်က
ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ၀င်လာလို့
စိတ်အလို ကို လိုက်လိုက်ရတာပါ…ညီလေးရေ…။
ဇီဇီခင်ဇော် says: နိမ့်တုံ မြင့်တုံ
နိမ့်တုံး မြင့်တုံ တစ်လှည့်စီပါပဲ…။
nozomi says: စောစောကတင် အဖြူရောင် ဝမ်းဆက် နဲ့ လောကဓံကြီး တွေ့လိုက်သေး
အဲဒါလည်း ဥပမာအလင်္ကာ မြောက်ပါတယ်ဗျာ…။
နိမ့်တုံ မြင့်တုံ ဆိုတာကိုး နော…။
မာဆတ်က သဒါ လေး က
အဲဒါလည်း လောကဓံပဲ ထင်ပါရဲ့…။
Alinsett @ Maung Thura says: ဘာမှတ်နေလဲ…
ဒါ…. လေးဘလက်ရဲ့ စာသားမြစ်ကြောင်း….
နားထောင်ကြည့်လေလေ…. မြစ်ရဲ့ စီးသံက…ဂီတတစ်ခုအလား..ဖမ်းစားနိုငလေလေပဲ…
ဗုံမဟုတ် ပတ်မဟုတ် ကဗျာလေးကို
၀င်ဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ညီလေး ရေ…။
အခုတလောက ကဗျာဘက် ဓါတ်ကျနေတယ် ဗျာ…။
ရေးလိုက် ပြန်ဖတ်လိုက် မကြိုက်လိုက် မို့ မတင်ဖြစ်ပါဘူးဗျာ…။
naywoon ni says: ဘလက်​​ချော ဂျီးကကို အကယ်​ဒမီ​ရှော့ခ်​ ကြီးပါဗျာ ။ ခင်​ဗျား​ပြောသမျှ ​ရေးသမျှ အကယ်​ဒမီ ​ရှော့ခ်​ဖြစ်​တာမဆန်းပါဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
လောကဓံတရားထက် ပြင်းတဲ့ အရက်
မြစပဲရိုး says: စိုးမြတ်သူဇာ လို တော့ မငိုခိုင်း ဘဲ မို့မို့မြင့်အောင် လို ဘာလို့ ငိုခိုင်း နေတာတုန်း။
မောင်ကမ်း က ပိန်လို့လား။ lol:-)))
မောင်တင်ဦး ရိုက်တဲ့ အဲဒီ ရုပ်ရှင်မှာ
မို့မို့မြင့်အောင် ကြီး အကယ်ဒမီ ရခဲ့တာ
ပါးပြင်တစ်ဘက်တည်းက မျက်ရည် ပေါက်ကနဲ ကျသွားတဲ့ အခန်းလေးကလည်း
မို့မို့ ကြီးရဲ့ အကယ်ဒမီ ရှော့ပဲလေ အစ်မရယ်…။
စိုးမြတ်သူဇာ အကယ်ဒမီ ရတာ ဘာကားတွေမှန်းတောင်
ကျေးဇူး အထူး ပါ အစ်မရေ…။
Mike says: .နင်လားဟဲ့ လောကဓံ
.ကျုပ်လည်း ကြက်သောက်ဆမ်းလေးမြည်းရင်း
.ရီပစ်လိုက်ချင်ရဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ရီ(ရယ်) ပစ်လိုက်ရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူးဗျို့…။
ဆယ်နှစ် ဆယ်နှစ် လို့ လည်း ပြောဖို့ မေ့နေဦးမယ်ဗျ…။
ကွန်းမန့်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ…။